Global Voices teny Malagasy » Iran : mahatsiaro ny faha 30 taonan’ny Revôlisiona ny mpamaham-bolongana · Global Voices teny Malagasy » Print
Iran : mahatsiaro ny faha 30 taonan'ny Revôlisiona ny mpamaham-bolongana
Voadika ny 17 Febroary 2009 14:27 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Lila
Sokajy: Iràna, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Tantara
Iraniana aman'arivony maro no nankalaza ny tsingerin-taona faha 30 ny Revôlisiona Iraniana ny 10 febroary lasa teo tamin'ny alalan'ny fihaonam-be natao tany Tehran sy ireo tanàn-dehibe maro manerana an'i Iran.
Nikabary nandritra izany fankalazana izany ny filoham-pirenena Mahmoud Ahmadinejad. Nambarany ny fahombiazan'i Iran ara nolazainy fa ny mahery indrindra ry zareo.
Maro amin'ireo mpamaham-bolongana Iraniana, izay sady zanatany no mpanao pôlitika, no niresaka ity fankalazana ity.
Nampiseho sary maro i Potin Nampiseho sary maro mikasika ny fihaonam-be tany Tehran i Potin. Nandritra izany fotoana izany mantsy no nitondran'ny olona maro ny sainan'ny Repoblika Islamita, sary lehibe maro manandratra ny “30 taonan'ny fahafahana”, ary koa sary mampiseho ny tsy fitiavana an'i Etazonia/Israely/Fikambanam-ben'ny Firenena maneran-tany.
I Ghomar Asheghaneh, mpitoraka bilaogy, izay tsy mitovy hevitra amin'ireo mpandray anjara amin'ny fihaonam-be sy ny manam-pahefana Iraniana, no tsy mino fa “firenena afaka” i Iran. Nolaviny ny fanambarana nataon'i Ahmadinejad nilaza fa “tokana ny fahafahana” any Iran:
همه بهره‌یی داریم از این نعمت سی‌ساله؛ وبلاگ‌نویس‌اش باشی، نشانی‌اش امیدرضا میرصیافی‌ی ساکن اوین و مجتبا لطفی‌ی ساکن زندان قم، معلم‌اش اگر باشی، روی تخته سیاه طناب برای‌ات می‌کشند و می‌شوی فرزاد کمانگر، دست‌های‌ات اگر از سختی‌‌ی کار پینه بسته باشد و کار به کارگری کرده باشی، منصور اسانلو می‌شوی و تبعیدی به زندان رجایی‌شهر…
Manana anjara avy isika tsirairay amin'ny atao hoe fahafahana. Raha mpitoraka bilaogy ianao dia tokony hitovy amin'i Mirsayafi  izay migadra any Evin na tahaka an'i Mojatba Lotif, migadra any Qom. Raha mpampianatra tahaka an'i Farzad Kamangar  ianao dia tokony handrary tady hanantonana anao, raha mpanao asa tanana ianao dia tokony hitovy amin'i Mansour Osanloo izay mialokaloka any amin'ny fonjan'ny RejaiShahr.
Mohammad Ali Abtahi, ilay rain'ny fanovana sady filoha lefitra no mpitoraka bilaogy, no mahatsapa fa zavatra tsara ny Revôlisiona Islamista. Nanoratra izy :
Maro amin'ireo zava-nitranga sy mitranga ato amin'ny fitantanana ny firenena no azo ekena na tsy azo ekena. Angamba ny taranaka ankehitriny mety manana finiavana noho ny tamin'ny 30 taona lasa, ary ny fahombiazan'izao tontolo izao tato anatin'ny 30 taona sy ny serasera no tena zava-dehibe amin'izy ireo. Kanefa aoka tsy hadino fa ny tantara dia mitamberina amin'ny fotoana voatendry. Mirehareha ny amin'ny Revôlisiona ananany efa 30 taona izao ny taranantsika arytsy misy afaka hanadino ny tantara fahiny. Raha manadino ireo ray aman-dreny nipoirany ny taranaka ankehitriny dia mazava ho azy fa hanadino azy ireo koa ny taranaka ho avy ary hiverimberina foana izany mandritra ny taranaka ho avy rehetra. Noho izany dia tsy tokony hanao tsinontsinona ny finiavan'ny taranaka ho avy isika.
Mr.Behi belongsizay ao amin'ny taranaka ankehitriny, tsy niaina ny revôlisiona ka maniry hanana Iran hafa no nanoratra:
Vao herintaona monja aho no nitaky fanovana ny Iraniana. Manao jery todika aho ary midera ireo izay nampisy iny zavatra iny. Tsy te ho eo amin'ny toerany anefa aho satria tsy mitovy amin'ny tontolo niainany ny zava-misy ankehitriny. Mihira “na andrefana na antsinana tsy mampaninona ahy” dia tsy vonona hanova ny fiainako mihitsy aho raha ampanarahana firehan-kevitra. Raha naniry ny hanova izao tontolo izao amin'ny alalan'ny revôlisiona i Iran dia maniry aho ny mba hifandraisana tanana ankehitriny.
Mampiseho kabary sy hira mikasika ny revôlisiona ao amin'ny fifandraisana maro i Ahestan . Mampahatsiahy ity mpitoraka bilaogy ity fa maro ireo gadra pôlitika nampijaliana tamin'ny fitondran'i Shah.
Mitatitra ireo resaka ao amin'ny bilaogy Iraniana mikasika ny revôlisiona Islamista ny Channel 4 News any United Kingdom 30 taona aty aoriana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/17/1570/
 Farzad Kamangar: https://globalvoicesonline.org/2008/11/29/iran-do-not-execute-farzad-kamangar/
 Mansour Osanloo : https://globalvoicesonline.org/2006/05/07/iran-free-osanloo/
 Hamid Tehrani: https://globalvoicesonline.org/author/hamid-tehrani/